Corona otrik'aretina: 252 no efa sitrana | Apg29
Izay rehetra narary dia tsy ho faty!
Alao sary: ​​Aftonbladet.
Amin'izao fotoana izao, 11.373 loza tamin'ity amin'ny Corona otrik'aretina. Ireo, 259 no maty, nefa 252 no sitrana!
Corona otrik'aretina in Jonkoping
Omaly hitako fa Soeda vao nanamafy voalohany nahazo ny toetry ny Coronavirus, iray ny vehivavy 20 taona no mitoka-monina any amin'ny faritra hopitaly ao Ryhov in Jonkoping . Velona roa lahatsary Izaho no nanaitra tamin'ny Corona otrik'aretina. Ankoatra ny zavatra hafa, nahoana izy ireo hampitahorana antsika Coronavirus?
Tany am-boalohany teo, dia nihevitra fa tena fandrahonana sy malalaka. Izay rehetra mahatonga ny Corona otrik'aretina tsy maty. Ireo izay maty efa-narary maro ny olona, toy ny maro amin'ireo maty ny gripan-kisoa taona vitsivitsy lasa izay. Ary ny Coronavirus any fandrosoana manomboka ny vanim-potoana ara-dalàna gripa , izay afaka mitarika ho jatony soedoa fahafatesana . Raha tsy Mampatahotra ny olona ka nilaza toy ny avo.
252 no sitrana
Ny 20 taona vehivavy Jönköping dia tanora, angamba matanjaka, fa tsy ho faty. Dia toy izany no izy dia ho sitrana tsy ho ela.
Amin'izao fotoana izao, 11.373 loza tamin'ity amin'ny Corona otrik'aretina . Ireo, 259 no maty , nefa 252 no sitrana !
Isika izay mino an'i Jesosy dia tsy hamela ny tenantsika ho raiki-tahotra, ary raiki-tahotra ny Coronavirus. Ny fiarovana dia an 'i Jesoa Kristy, na inona na inona mitranga.
Andriamanitra no hamonjy anao amin'ny areti-mandringana
Omaly antsoina hoe Rune raibe ahy. Noho ny Coronavirus, dia nomeny ahy ny andinin-teny lehibe:
Sl 91: 5 Tsy hatahotra ny horohoro nony alina ianao, fa tsy ny zana-tsipìka manidina nony andro, 6 dia tsy ny areti-mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny areti-mandringana nisamboaravoara amin'ny mitataovovonana.
Nahoana isika no tsy matahotra ny mpino an 'i Jesoa? Ao amin'ny andininy teo aloha, azonao ny valiny:
Salamo 91: 1 NY mitoetra any amin'ny avo indrindra fiahian'ny monina eo ambanin'ny aloky ny Tsitoha, 2 dia hoy izy: "Jehovah no Fialofako sy batery fiarovana, Andriamanitro ô, no itokiako." 3 Izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandringana manimba . 4 Ny volon'elany no anaronany anao, ambany elany no hialofanao. Ny fahamarinany no ampinga kely sy ampinga lehibe.
Raha toa ianao ka tsy nandray an'i Jesoa Kristy ary natao voavonjy aho fahazoan-dalana mankany fa tena manao izany. Azonao atao ny mandray an'i Jesosy amin'ny alalan'ny fivavahana vavaka io tolo-kevitra mafy mivantana an'i Jesosy:
"Jesosy, aho mandray anareo ankehitriny sy manaiky Anao ho Tompo. Mino aho fa Andriamanitra efa nanangana anao tamin'ny maty. Misaotra taminareo fa Izaho no izao voavonjy. Misaotra anao fa ny namelanao ny helok'ity ahy, ary misaotra anao fa Izaho izao dia zanak 'Andriamanitra. Amen. "